China Ummeli ocacisa iBT-808 uMvelisi kunye noMthengisi | BGT
Ukucacisa iAgent BT-808
I-BT-808 (Isicacisi seHyper) yinto entsha ephuculweyo yokucacisa iarhente yokwandisa ubushushu bekristale ngokuchazwa okungcono.
Ingasetyenziswa kwi-PP, PET, PA (Nylon) kunye nezinye izinto.
I-BT-808 (Isicacisi seHyper) yinto entsha ephuculweyo yokuCacisa ukuCacisa kunye nokusebenza okuphezulu ukonyusa ubushushu bekristale, ukucaca, ukumelana nobushushu, ukuqina kwe-PP kunye nezinye izinto.
Izibonelelo zokongeza i-BT-808:
Inokutshintsha iipropathi ezibonakalayo zempahla ye-PP, ukonyusa amandla oqinileyo, iimodyuli eziguqukayo kunye nefuthe lezinto. SebenzisaI-BT-808, indawo yokulungisa iya kwandiswa ngozinzo olubalaseleyo ekuqhekekeni kwe-oxidative kunye nokusebenza okuphindiweyo. Ayilivumba kwaphela kwaye ayithinteli incasa yokutya.
Umgubo omhlophe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka
PP, PET, PA (nenayiloni) njl
Polymer ilungiswe ngu Ummeli wenyukliya, Ayigcini kuphela ngeempawu zokuqala zepolymer, kodwa ikwanentsebenzo engcono nenani lezinto ezininzi kunokwenza izinto ngokusebenza kakuhle kunye noluhlu olubanzi lwesicelo. Sebenzisa Ummeli wenyukliya kwi-polypropylene ayithathi indawo yeglasi kuphela, kodwa ithathe indawo yeepolymers ezinje ngePET, i-HD, iPV, iPC, iPC, njl.njl.
ITSHAYINA BGT inokubonelela ngoluhlu olupheleleyo lwe Ummeli wenyukliya, ofana nokuCacisa uMmeli, Ummeli wenyukliya wonyusa ubungqindilili kunye noMmeli weNyukliya yeNyukliya. Ezi mveliso zinokusetyenziswa kwi-PP, PE, PET, PBT, NYLON, PA, EVA, POM kunye ne-TPU njl.
Egqithileyo Ummeli weFavouring
Okulandelayo: Ukucacisa iAgent BT-9803M